Openshot: ငါတို့ဓာတ်ပုံများ၏ဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးပါ Linux မှ
vr_rv | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ကျွန်ုပ်တို့ရုပ်ရှင် (ဟောလိဝုဒ်အတွက်) ရုပ်ရှင်ကားရိုက်လိုသောကြောင့်သို့မဟုတ်စုံတွဲနှင့်အတူနှစ်ပတ်လည်နေ့နီးကပ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုကိုပြင်ဆင်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ အပန်းဖြေရန်အတွက်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ပုံ၏ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုပေမည်။
con ဖွင့်လှစ် ကျနော်တို့လုပ်ငန်းတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tool ကိုရှိသည်။ ဤစီမံကိန်းအမျိုးအစားကိုတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်ကိရိယာများရှိသော်လည်းမည်သူမျှ Openshot မှရရှိနိုင်သောစိတ်ကြိုက်အဆင့်ကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက program ကိုဖွင့်ပါ (program ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်) ။ တခါဖွင့်လိုက်ရင်လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ (ပုံတွေနဲ့အသံ) ကိုတင်တယ်။
ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးရှိပြီဆိုတာနဲ့ tab ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် စီမံကိန်းဖိုင်များ
ထို မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့်အစဉ်အတိုင်းပုံများကိုဆွဲယူပြီးအောက်ဘက်ရှိဘားသို့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုရှိသည်။
ပုံတွေအားလုံးပြီးတာနဲ့တင်ဆက်မှုကိုစတင် configure လုပ်တယ်။ မောက်စ်ကို နှိပ်၍ ပုံတစ်ပုံပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပါ မောက်၏ညာဘက်ခလုတ်ကို ဆက်စပ်မီနူးကိုဖွင့်ရန်
ထိုအ၏ option ၌တည်၏ အားပေးပါ ကျွန်တော်ရရှိနိုင်ပါသောသူတို့ထဲကတစ်ခုရွေးပါ။
ဒီ Animation ကိုထားချင်တဲ့ပုံအားလုံးနဲ့ဒီအဆင့်ကိုလုပ်တယ်။ အရင်အဆင့်ပြီးနောက် tab ကိုသွားပါ အသွင်ကူးပြောင်းရေး, ပုံတစ်ပုံနှင့်အခြားတစ်ခုအကြားအသုံးပြုနိုင်သောကုလားကာများနှင့်တူသည်။
Transition ပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ပါ မောက်၏ညာဘက်ခလုတ်ကို နှင့်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုတည်းဖြတ်
ကပြောပါတယ်ဘယ်မှာ လိပ်စာ: အထက် ဒါကြောင့်ပုံရဲ့အစမှာဖြစ်ပါတယ်အဘို့ဖြစ်၏ Down သူတို့ကပုံတစ်ပုံရဲ့အဆုံးမှာထားလျှင်
ယခု Transitions များနှင့်အပြီးသတ်ပြီးပါကနောက်ခံသီချင်းထည့်ရန်အချိန်ရောက်လာသည်။ နောက်ကျော tab ကို စီမံကိန်းဖိုင်များ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်သီချင်း (ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုထက်ပိုပါက) ရွေးပြီးပုံများပါသည့်အောက်ရှိဘားသို့ဆွဲယူပါ
ပုံ၏အဆုံးမှာ cursor ကိုတူညီသောလိုင်းပေါ်တွင်နေရာချပြီးသီချင်းဘားတွင်အမြဲနေရာချသည် ဘယ်ဘက်ခလုတ်
ငါတို့နှိပ်ပါ မောက်၏ညာဘက်ခလုတ်ကို ကျန်ရှိနေသေးသောအသံအပိုင်းအစကျော်နှင့်အတူဖယ်ရှားလိုက်ပါ Clip ဖယ်ရှားပါ.
တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင်နှိပ်လိုက်ရင်ငါတို့အလုပ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ် Ctrl ++Z ကျနော်တို့တ ဦး တည်းအားဖြင့်တ ဦး တည်းလုပ်ဆောင်အရေးယူမှုများကိုပယ်ဖျက်ဖို့
ထုတ်ပေးသော directory ကိုရွေးချယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အတိုင်းအချို့သော parameters များကိုပြောင်းလဲပြီး Export Video ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
တင်ပို့မှုပြီးဆုံးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းကို Disc တစ်ခုထဲသို့ကူးယူပါသို့မဟုတ်၎င်းကိုဗီဒီယိုချန်နယ်တစ်ခုသို့တင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Openshot: ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများ၏ဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးပါ
အလွန်ကောင်းသောနည်းပြဆရာ !! သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ tuto.si က openshot အကြောင်းသိပေမယ့်တစ်ခါမှမသုံးဖူးသေးဘူး (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ (ရုပ်ရှင်အမှတ်အသားလုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်) ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီ post နဲ့ငါ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေစမယ်။
ကောင်းပြီ, စာရေးသူကြိုက်လျှင်, သူမှာလုပ်နိုင်ပါတယ် http://10minutos.desdelinux.net
ငါက upload လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ငါဒီဗီဒီယိုအယ်ဒီတာကို KDEnlive ထက်ပိုကြည့်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ XFCE desktop အတွက်အကောင်းဆုံး။
Anaia Flores placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Anaia Flores အားပြန်ကြားပါ
အနည်းဆုံးတော့သင့်ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Windows ဗားရှင်းကိုမမြင်ရပါ။
ခက်လား အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ သင် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် repositories တွင် OpenShot ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Juan Carlos Benítez ဟုသူကပြောသည်
Juan Carlos Benitez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်မေးခွန်းကတော့ Openshot ကိုသွင်းရသလား (သို့) netbook ရှိသလား။
Huayra / Linux ကပုံမှန်အားဖြင့်ယူလာတယ်လို့ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခု၊ ငါဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ချင်တယ်၊ သူကအဲဒီလိုခံစားမိတဲ့အခါငါတင်ပို့လိုက်ရင်ဘာမှမကြားဘူး။ ဆိုးဆိုးရွားရွားပြောခဲ့တာက
Bountysource - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစီမံကိန်းများအတွက်အကူအညီ